🥇 ▷ Gears Pop !, Gears of War iyo Funko Pop ciyaarta ciyaarta ✅
Gears Pop !, Gears of War iyo Funko Pop ciyaarta ciyaarta
Fududaynta Funko Pop figriyeyaasha ciyaarta ciyaarta ee Gears of War hadda waxay leeyihiin ciyaar. Sidaad u akhrineyso. Waa loo yeedhay Gears Pop!, waana khibrad xiiso leh oo iskudarta fikradaha waxa lagu arko ciyaaraha kale ee mobilada sida Clash Royale. Marka, xitaa haddii ay jiraan waran-wadeyaal (qoryaha submachine-ka leh leh oo lagu dhex dhisay chainsaw), iska illow ficilka ugu fiican. Xaaladdan oo kale, istiraatiijiyadda ciyaartoyga iyo kartida uu u leeyahay falcelin ayaa fure u ah guusha ciyaarta iyo soo afjaridda ciidamada cadowga. Waxaan horey u awoodnay inaan ku ciyaarnay, oo halkan waxaan kuugu sheegaynaa waxa ay furayaashu yihiin.
Istaraatiijiyad iyo istiraatiijiyad dheeri ah
Sidaynu nidhaahno, ficilku waa labaad ee Gears Pop! in kasta oo hadafkeennu yahay weli in la soo afjaro cadowga ku saleysan hubka. Waxaan aragnaa daqiiqadihii ugu horreeyay ee ciyaarta, halkaas oo cinwaanku horeyba noogu qasbay inaan ciyaarno ciyaarta ugu horreysa sidii umeerin. Halkaan waxaan ku barannaa in makaanikada lagu sameeyo agagaarka ciyaarta dheer oo u eg sida garoonka rugby. Waxaa ku jira saddex lammaane oo darbiyada ah Halkee laga saari karaa taasna, haddii ay ka adkaadaan, u fidiya aagdeena saamaynta si ay uga baxaan ciidammada cadowga.
Sababtoo ah haa, waxaan nahay taliyayaasha dagaalka, kuwa doorta noocee ciidanka la tuurayo, xaggee iyo goorta la qabanayo. Waxaas oo dhan, dabcan, iyada oo aan laga daalin geedi socodka kheyraadka ee soo kabanaya waqti ka dib. Markaan haysanno agabyada, taargooyinka ciidamadu way shaqeynayaan, iyagoo awood u siinaya inay ku soo bandhigaan qayb kasta oo ka mid ah dhulkeenna la qabsaday. Ama difaacda labadeena munaaradood iyo mowqifkeenna, ama inaan weerarno labada munaaradood ama taliyaha cadowga.
Miyay kuu muuqanaysaa haa, waxay aad ugu egtahay waxa ka dhacaya Clash Royale. Labada fikrada ee goobta, iyo sidoo kale kaararka iyo munaaradaha waxay u muuqdaan inay toos uga baxayaan ciyaarta Supercell. Mana aha wax xun. Dhab ahaantii waan helnay madadaalo, la garan karo (hadaad tahay ciyaartooy Clash Royale) aadna u dagan.
Calaamadaha iyo dadka caanka ah
Ciyaartoy kasta wuxuu ku bilaabmaa xaashi gaar ah. Xaashi kastaa wuxuu tilmaamayaa ciidan. Arrinta xiisaha lihi waa inaan badino kulamada si aad u hesho feeraha si aad u furnaato (lasoco tixraacyada Clash Royale) halkaas oo calaamado badan ay naga sugayaan. Dabcan halkaas waxaa kujira qayb ka mid ah taageere xoog leh. Calaamaduhu waxay noqon karaan astaamo sida kuwa xurmada leh sida kuwa ka soo horjeeda ee Gears of saga sagaal, Marcus Phoenix, iyo kuwo kale oo badan oo dugsi sare ah. Ama xitaa hub lagu arkaayay wareejinta.
Wax ay Gears of War ciyaartoydu ku farxi doonaan kuna isticmaali doonaan garoonka dhexdiisa. Dabcan, halkan kuwa sida ugu badan ugu guuleysta uguna hagaajiya sumcaddooda, fursadaha badan ee lagu sii wado fuulitaanka ciidda ayaa noqon doona. Marka wax walbaa waxay kugu dhiirigelinayaan inaad sii waddo dagaalka marlabaad iyo mar labaad inaad madadaalo u hesho guuleysto waxyaabo badan.
Ciyaar bulsheed oo ay ka buuxaan waxyaabo dheeri ah
Furaha furaha ah ee Gears Pop! waa in la gaaro suuqa qaan gaarka ah. Taasi waa, oo leh waxyaabo badan oo laga bartay Clash Royale. Farsamooyinka ciyaarta ayaa u muuqda wax xoogaa firfircoon oo uga mahadcelinaya derbiyada iyo firfircoonida ciidamada. Laakiin sidoo kale waxaa jira nooc kasta oo ah hawlgallada maalinlaha ah iyo munaasabadaha in la fuliyo si cayaarta lagu ciyaaro ma ku dhammaato caajis.
Intaa waxaa sii dheer waxaa jira qayb adag Bulsho. Kaliya maahan inaad la dagaallanto ciyaartoy dhab ah oo ka socda adduunka oo dhan, laakiin waxaa ugu wacan suurtagalnimada abuuritaanka kooxo illaa 50 xubnood ah. Waxaas oo dhan waxay kor ugu qaadayaan suurtagalnimada suurtagalka iyo dheelitirka ciyaarta.
Gears Pop! waa la soo dejisan karaa bilaash ah labada telefoon ee Android iyo iPhone. Kaliya waa inaad maraa Google Play Store ama App Store si aad uhesho. Dabcan, waxaa jira waxyaabo la bixiyay oo ku dhex jira arjiga, sida qaybta Bakhaarka si loogu helo calaamado ama laabta si dhaqso leh oo loogu beddelayo kiristaalo iyo qadaadiic. Alaabada lagu iibsan karo lacag dhab ah.
Warar kale oo ku saabsan… Clash Royale